SOOMAALI-NIMADU MAXAY LA QIIMA TAHAY MAANTA?
Waxaan badanaa aqriyaa qoraalo badan oo ka tarjumaya dareenka qoraaga, amaba duruufo markaa jira oo uu doonayo in uu qoraagu sida uu isagu u arko uu bayaansho. Waxaa badanaa dhacda in qoraalka qoraagu uu dheeraado, aqrintiisana ay dadku ka caajisaan, hadaba waxaa is weydiin leh, maxaa ay soomaalidu qortaa?, maxaase dheereeyey qoraalka ay kaga hadlayaan aragtidooda?.
Hadaan isku dayo in aan ka jawaabo su’aalahan anoo jeclaan lahaa in aan arko qoraal keygan ka duwan oo arintan oo kale ka hadlaya, ayaan hadana jecleystay in aan cabiro waxa iiga dhex muuqday inta badan qoraalada soomaalida.
A: Dagaal xagga saxaafada ah, oo xoogiisa looga gol leeyahay in aqrintiisa lala yimaado goobaha fadhi ku dirirka loo yaqaan, oo ay baryahan dambe masaajidadu ku soo darsameen. Arintaan ayaa badanaa dhacda in lagu cabiro dareen laga yaabo in qoruhu keligii qabo, amaba uu ka soo uruuurshay goobaha noocaas ah, isaga oo doonaya in uu kaga hortago dareen kale oo ka soo horjeeda midka uu markaa qoruhu aaminsan yahay.
Tusaale ahaan: waxaa qoraalada noocaan ahi ay u badan yihiin kuwa lagaga hadlayo shirarka soomaalida, amaba shirarka gaarka ah ee u socda kooxaha soomaalida, amaba wax walbaa oo shir qabiil sal ku leh. Ka daa mooyee sidanna ku day laga helo qoraalada noocaan ah, sababtana waxaan ku macneeyey in ay tahay oo keli ah xasadnimo, iyo rabitaan aanan lala rabin reerka shiraya, amaba kooxaha shiraya, amaba soomaalida isu timid in ay ka miro dhashaan shirka amaba wada hadalada ay isugu yimaadeen.
B: Nafis, amaba iska saarid dareen qofka ku raagay oo uu la’aa meel uu ku sii daayo qeybtan oo ah mid la macno ah oohinta qofta laga keeno loona daayo inta uu ka dhameysanayo, si uusan u hig-higleyn, mar qurana u nafiso. Waxaa hadaba yaab leh qoraalkaan oo ah midka ugu dheer uguna yaabka badan, ayaa badanaa ku bilaawda tusaale iyo hadal qurxoon, iyada oo xumaan intii la adeegsan karo oo idil la isugu keeno qoraalka, tan oo badanaa kalifta in qofka qoraalkaa aqriya uu badanaa yahay mid inta badan amaba 100% la aragti ah qoraaga.
Tusaale ahaan: Waxaa hada ka hor dhacday meel masaajid ah ayaa laga hadal hayey qabiil kamid ah qabaailada soomaalida, iyada oo weliba lagu sigatay in diintaba laga saaro marka la fiirsho waxyaabaha xumaanta ah ee qabiilkaa laga soo uruurshay. Inyar kadib ayaa waxaa yimid nin u dhasahy qabiilkii la caayayey oo lagag baqay in uu maqlayey hadalkii meesha laga lahaa. Raga hadalheyntaa waday ayaa u badnaa kuwo u dhexeeya da’aada 50 iyo wixii ka sareeya. Waxaa isla markiiba bilowday in qabiilkii la caayayey laga sheekeeyo wax alaale iyo wixii wanaag ahaa oo la heli karo in laga sheego., si loo shaki baxsho ninkii yimid ee lagaga cabsi qabay in uu wax uun ka maqlay hadaladii reerkiisa lagu najaaseeyey ee hore.
C: Mid nuxur leh oo dardaaran wata aadna u gaaban welibana miisaaman, qoraalka noocaan ah ayaa badanaaba labo dhinac oo is feer socda u qoran isaga oo uu qoraagu mar walbaa muujinayo tusaalooyin is feer socda oo xasuusin iyo door gelin u badan.
Tusaale: waxa aan u soo qaadan karaa qoraalkii ugu dambeeyey ee Mr Abdirizak hagi Hussein oo ah ra’iisul wasaarihii soomaaliye xiligii dowladii rayidka uu kula hadlayey odayaasha dhaqanka ee laga filayo in ay dhawaan soo xulaan raga soomaalliyeed ee laga soo xuli doona madasha shirka soomaalida uga socda mbeghati oo ah duleedka magaalada Nairobi ee wadankaasi kenya. Qoraalka noocaan ah oo ah dhambaal nooca loo yaqaan ayaa hadana muujinaya doorshada hortaala odayaasha soomaaliyeed ee dhaqanka iyaga oo la xasuusiyey dhibkii umadu soo martay, iyo waxa laga sugayo maanta.
Hadaba gabo-gebo ahaan waxaan jeclaan lahaa dhammaan dadka wax qoraayi in ay isku dayaan ilaa iyo inta ay awoodaan in ay muujiyaan waxa ay doonayaan, sababta ay u doonayaan, iyo waxa ay diidan yihiin, iyo sababta ay u diidan yihiin iyo badalka ay hayaan oo ay is leeyihiin halagu bedelo, maadama laga fiicanyahay wax uun iska diidista micno la’aanta ah. Qofka aad ugu tala gashay qoraalkaagu in uu gaaro, waa in uu ka heli karaa wax fikirka uu qabo la mid noqda, amaba wax ka bedeli kara, waxaase nasiib daro ah in qoraal qoraagu uu saacado dul fadhiyey, dhowrjeerna ku noq noqday sixitaankiisa in uu noqdo lama qaataan, amaba qoraalka dadka laga qoray la yaqaan, cida loo qorayna la yaqaan, inta dhexese ay iska banaantahay tahay.
WANAAG IYO WADAN INSHA ALLAH
Faafin: SomaliTalk.com | Aug 20, 2003